The Power Of Hundred – The Way Of Self Employment Investing Just Rs 100. – Agamya Shiromani
The Power Of Hundred – The Way Of Self Employment Investing Just Rs 100.
The Power Of Hundred
Unity Is Power त हर कसैलाई कण्ठस्तै छ । उदाहरण हजुरलाईनै ज्यादा आउछन त्यसैले देउसुरे भन्न लगाईन । Power Of Hundred पनि Power Of Unity नै हो एक हिसाब ले, तर Unity मा असंख्यक ब्याक्ती रहन पाए भने Hundred मा सिर्फ 100 को कुरा गर्दैछु ! न त उनान्सय न त एक सय एक ।
यहा कुनै मोर्चा खडा गर्ने या कुनै दलबल बनाउने Unity को कुरा भने दूर दूर सम्म हुनेछैन । कुरा चल्दैछ Idea को , बेरोजगारी बाट स्वबलम्बी बन्ने बाटोको ।
हामी हर कसैको दिमागमा १०१ Idea हरू छन । छोईलाको सितन सङ्गै छल्किएका मदिरे मगज होस या कोईलाको तापमा तताईएको थोतिबजैको बाटैको मकैको पालो पर्खिएर बसेका सज्जनको भिडमा , आईडियाको ओईरोछ सर्बत्र ।
चाए दारी ग्रूप होस या नारी नगरी,
आईडियाको बीउ मात्र छर्कनुस, बिरुवा उमारी फूलाई फलाई अन्नभण्डार गरिदिन्छन । तब के गरिस या केही गरौको प्रस्तावना पोख्नुस, क्षणभरमै १०१ आईडिया तहसनहस गराउने १००१ बहाना छल्किनेछन । जसमध्ये तपाईंको पनि पनि दिमागमक डेरा जमाई बसेको हुन सक्ने २ थान Mutual बाहाना : एक पैसा छैन र अर्को कसैको साथ छैन ।
तर तपाईंमा केही गर्ने जोस, जागर र चाहाना छ भने बाहाना लाई अन्तै पाखा लगाएर सोसियल मिडिया र अन्लाईन अर्निङ्ग मा आँखा लगाउनुस र रवाना हुनुस The Power Of Hundred तर्फ ।
ट्राई नगरेको कहाँ हो र भएन
वेबसाइट छ भिजिटर्स छैनन
यूट्यूब छ मनिटाईज त कता हो कता सब्स्क्राईबर समेत बढ्दैनन
यहि हो समस्या ?
कि के कसरी सुरू गर्ने आईडियै छैन ?
वेबसाईट बनाएर मात्र हुदैन, चलाउन पनि पर्छ
भिजिटर्स आउदैनन, ल्याउन पर्छ
मनिटाईज गराउन पर्छ, सब्स्क्राईब बढाउन पर्छ । एक दिन क्यास विथड्र गर्न लाई महिनौ को मेहेनत हुन जरुरी हुन्छ । त्यो पनि सहि ठाउँ मा सहि ढङ्गबाट !
यी सबै कुरा लाई एउटा फोल्डरमा सु-ब्याबस्थित ढङ्गले सजाई Shift +Delete पछि Enter हान्दिनुस ।
खेलै खत्तम ! त्यसपछी F5 गरेर आउनुस ! स्वागत छ तपाईलाई मेरो The Power Of Hundred को प्लानमा ।
प्लान के हो ?
म परमपुज्य गुरुजी श्री आचार्य “चाणक्य” जी को शिस्य हु । जन्मले ब्राह्मण कुलमा जन्मेता पनि कर्मले वैश्य स्विकार्दछु । तसर्थ व्यापार मेरो धर्म हो । बुज्रुककरूको कथन छ कि हरेक सफल पुरुसको पछाडी नारी को हात हुन्छ । यसमा कति सत्यता होला नहोला दैव जानुन । तर हरेक ब्याबसायिको सफलताको पछाडी उसको ब्याबसायिक रणनिती यानी बिज्नेस प्लानको उच्चस्तरीय भूमिका रहन्छ । एक बिज्नेसमेनका लागि बिज्नेस प्लान उसकी बेगम जस्तै हो । अव यो कुरा त हजुरहरूलाई अवगतै छ कि बेगम हमेशा बुर्कामा नै सुन्दर र सुरक्षीत रहन्छिन !
काम को कुरो गरौ
गुरु ‘देबकोटा’को जस्तै मेरो पनि आफ्नै माकुराजाले मगजछ । जसरी बुनु आफ्नै जाल । यो जाललाई फेवाताल झै विशाल बनाउनका लागि हाललाई एक सय जनाको कमालको टिम बनाउने सोचेको छु । जसले चाहे भने धमाल अवस्य गर्न सक्नेछन । यसबाट तपाईं मालामाल हुने आस्वसन भने म भुलेर पनि दिन सक्दिन , तर गोलमाल पनि कदम कदाचित हुन दिने छैन !
यसै बरालिएर टाईमपास गर्नुको साटोमा डिजिटल मार्केट को बाटोमा, अन्लाईन अर्निङ्ग को पाटोमा आउनुस एक निस्चित गन्तब्यलाई टार्गेट गरि अघि बढौ, नेतृत्व म गर्नेछु ।
Team Of Hundred मा कसरी सामेल हुने ?
मैले पहिला नै प्रस्ट्याई सके कि म व्यापारी हु । बिना मुनाफाको ब्याबसाय सुरु गरे पाप लाग्न सक्छ । तसर्थ सय मा सामेल हुन १०० रुपया गुरु दक्षिणा भन्नुस या अन्य शुल्क, जे नाम दिनुस तर रू १०० दिनुस !
१०० दिन सम्म म तपाईं लाई गाईड गर्नेछु ! दैनिक करिव १०० मिनेट समय भने तपाईंहरूले भविस्यको लागि सम्झेर लगानी गर्नुपर्नेछ !
कसैको दिमागमा यतिबेला १००*१००=१०,००० को हो हिसाब दौडिन थाल्यो र फेक हो, कमाई खाने बाटो, स्केम जस्ता प्रेरणादायी कमेन्ट गर्ने रहर जागेर आएको भए एत्रैसित्ती । १०० रुपयामा १०० दिन सम्म दैनिक १०० मिनिट ट्यूसन पढाउनु, त्यो पनि रियल लाईफ स्वभलम्भी बनौ, अन्लाईन अर्निङ्ग को आधारस्तम्भ खडा गरौ, मिलेर अघि बढौ भन्दा फेक लाग्नेलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
मिलेर काम गरौ, १०० दिन मा १०० जना मिलेर काम गर्दा के थाह १०० दिन पछि १०० करोड कमाउन सकिने आधार स्तम्भ पनि त बन्न सक्छ !
गए के जान्छ ? जुन यत्तिकै फोक्कड मा दैनिक गैत रहेकोछ ।
दुरदर्शि भिजनका साथ एक पक्का अवधारणा हो । साझ बिहान बाटो छेउ मा भेटिने भक्का जस्तो तात्तातै खाउ, जलि मरौ भन्ने हरूका लागि यहाँ कुनै खास चटनी नभेटिन सक्छ । धैर्यधारण र ईमानदारीताका साथ उल्लेखनिय मेहेनत गर्नेहरूको मात्र नैया पार हुन सक्छ , अन्याथा माझी जति नै टेक्निकल भएता पनि टाईटानिक को अन्तत खाईमै मै !
इच्छुकले यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुहोला । स्थान १०० को लागि मात्र रहेकोछ । कम्प्युटर तथा ईन्टरनेट सम्बन्धी एटलिस्ट बेसिक नलेज हुन अपरिहार्य रहेकोछ । राम्रो चल्ने मोबाईलका साथमा ईन्टरनेट हुनै पर्नेछ । कम्प्यूटर / ल्यापटप / वाईफाई भए सुनमा सुगन्ध !
१०० दिनको बिचमा कसैलाई ठिक नलागे निस्संदेह भनुहोला, हजुरको रू १०० स-धन्यवाद फिर्ता गरिनेछ ।
१०० दिन बिचमा दिएको टास्क पूरा नगर्ने , समय नदिने, टिममा असहज महसुस गर्ने / गराउने , बेमतलवी या काममा बधा झल्कने कार्यकलाप कसैबाट भएको खण्डमा बिना धन्यवाद १०० मात्र फिर्ता गरि टिम बाट अलग गराईनेछ !
१०० दिन भित्र गरिने कार्य ब्याबस्थापन को खर्च तथा गरिएका काम बाट हुन सक्ने प्रत्यक्ष या अप्रतक्ष फाईदा / बेफाईदा मेरो रहनेछ । पूरा १०० दिन इमान्दारी तथा मेहेनती ढंगबाट साथमा रहने कर्मठ ब्याक्तित्वलाई मात्र १०० दिन पश्चातको योजनामा सामेल गराईनेछ ।
मेरा गन्थन ध्यानपुर्वक पढिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद !
र दिलबाटै शेयर गरि साथ दिनुहुने विशाल हृदयका धनि तपाईंलाई प्रेमपुर्वक आभार !
मलाई व्हाट्स एप मार्फत सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ !
sajilO Online Pvt Ltd
2 thoughts on “The Power Of Hundred – The Way Of Self Employment Investing Just Rs 100.”
I am agree with you. want to beapart of your hundred. check your what’s app.
राजन सुवेदी says:
ल दाइ मपनी छु है के कसो गर्नु पर्ने हो
Ramesh Adhikari on kautilya Ayurvedic
राजन सुवेदी on The Power Of Hundred – The Way Of Self Employment Investing Just Rs 100.
Vishal Rana on The Power Of Hundred – The Way Of Self Employment Investing Just Rs 100.
Theme of Theme 404. All right researved Agamya Shiromai